HomeWararka MaantaGarcia: Roma Wali Waxay Awoodaa Inay Juventus Horyaalka Kula Loolanto
Tababaraha kooxda Roma, Rudi Garcia ayaanay wali ka dhaadhacsanayn in horyaalka wadanka Talyaaniga ee Seria A uu sanadkan gacanta ugu jiro, kooxda Juventus, waxaanu aaminsan yahay inaan tartanka wali lagu kala bixin ee uu socdo .
Horyaalka Talyaaniga oo ay ka hadheen kaliya 6 ciyaarood , kooxda Juventusna ku hayso hogaanka 8 dhibcood oo saafi ah oo ay ka horeyso kooxda ku soo xigta ee Roma, waxaas oo dhani uma dhaadhacsana tababaraha kor u soo qaaday kooxda caasimada ka dhisan ee Rudi Garcia, Romana wuxuu la rabaa inuu u gacan galliyo horyaalkii koowaad ee tan iyo sanadii 2001 oo ay urtiisa ugu dambeysay.
“Waxaanu u ciyaaraynaa kaliya inaan ku guulaysano,” ayuu yidhi Tababaraha Faransiiska ah ee kooxda Roma oo Sabtida maanta ah la ballansan inuu marti galliyo naadiga Atalanta. “Inaan helno dhibcahaas aadka u badani waa arin noo fiican anaga , waxaanan u dadaalaynaa inaan gaadhno meesha ugu saraysa ee aan horyaalka ka gaadhi karno .
“Wakhti xaadirkan, meesha gacantayada ku jiraa waa kaalinta labaad, waana barta aanu ugu horeyn difaacideeda xooga saarayno, inta dhimana anaga ayaya nagu xidhan tahay , halkaas oo kaalinta koowaad oo kali ahi tahaya meesha yoolkayagu ku wajahan yahay.
“Waxaa igu maqaalo ah in la yidhi markii Juve ka badisay Livorno, tartankii horyaalku wuu dhamaaday, halka guushayadii u dambeysay ahayd Axadii, markaas oo qof kastaa yidhi , wali hayaankii waa nool yahay oo fari kama qodna.”
Qaar ka mid ah Taageerayaasha kooxda Chelsea oo si Yaab leh u fasirtay wixii uu sameeyay wiilkooda Eden Hazard kulankii Xalay
Suarez:”Diiradda waxaanu saaraynayn ku guulaysiga Horyaalka”
19/04/2014 Khadar Dirir